इन्स्टाग्राममा कसरी बढाउने फलोअर्स ?
२८ माघ २०७५, सोमबार १४:४३
सोसल मिडियामा आफूलाई पछ्याउनेहरुको संख्या तिव्र रुपमा बढुन् भन्ने चाहना कसको नहोला र रु कतिपय सेलिब्रेटीले त आफ्नो इन्स्टाग्राम लगायतका सोसल मिडियाका फलोअर्सको संख्या बढाउनकै लागि जनसम्पर्क कम्पनीहरु समेत भाडामा लिने गर्दछन् ।
यदि तपाइँ पनि आफ्नो इन्स्टाग्राम अकाउन्टमा फलोअर्सको संख्या बढोस् भन्ने चाहनुहुन्छ तर कुनै पिआर कम्पनी खटाउने क्षमता छैन भने यसको लागि यी ५ सजिलो तरिकाहरु अपनाउन सक्नुहुन्छः
१। गुणस्तरीय सामाग्री हुनु जरुरी स् इन्स्टाग्राममा बढि भन्दा बढि फलोअर्स बनाउनका लागि तपाइँले पोष्टिने सामाग्रीहरुको गुणस्तरले ठूलो भूमिका खेल्दछ । यसका लागि तपाइँले विभिन्न खाले फिल्टर्सको पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । यसबाट तपाइँको अकाउन्टमा धेरै भन्दा धेरै अडिएन्स इन्गेज हुन्छन् । यस बाहेक तपाइँले इन्स्टाग्राममा आफ्ना पोष्टहरुको निरन्तरता कायम गर्नुपर्दछ । अर्थात् लामो समयसम्म इन्स्टाग्रामबाट हराउनु भयो भने तपाइँका फलोअर्स बढ्ने छैनन् । त्यसैले निरन्तर रुपमा उत्कृष्ट तस्वीर तथा सामाग्रीहरु पोष्ट गर्नु इन्स्टाग्राममा फलोअर्स बढाउने सबैभन्दा पहिलो उपाय हो ।
२। ह्यासट्यागको सही प्रयोग स् इन्स्टाग्राममा पोष्ट गर्नेबेला कस्तो ह्यासट्याग प्रयोग गर्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिनु पर्दछ । यसले तपाइँको पोष्टको भिजिबिलिटीमा असर पार्दछ । त्यसैले आफ्ना इन्स्टाग्राम पोष्टमा लोकप्रिय तथा ट्रेण्डिङ्ग ह्यासट्याग प्रयोग गर्नुपर्दछ । साथै अनावश्यक ह्यासट्याग प्रयोग गर्नबाट बँच्नुपर्दछ ।
३। पेज अप्टिमाइजेसन स् यदि तपाइँ कुनै ब्राण्डलाई इन्स्टाग्राममा प्रवर्द्धन गर्न चाहनुहुन्छ वा कुनै जानकारी धेरै भन्दा धेरै मानिसहरुसम्म पुगोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाइँका फलोअर्सको संख्या अधिक हुनु आवश्यक हुन्छ । यसका लागि तपाइँले आफ्नो इन्स्टाग्राम अकाउन्टलाई अप्टिमाइजेसन गर्न सक्नुहुन्छ । यसमा ब्राण्ड लोगो, डिस्प्लेको तस्वीर आदि राख्नु जरुरी हुन्छ । यसका साथै आफ्नो प्रोफाइललाई प्रयोगकर्ताका लागि पब्लिक गराइदिनु पर्दछ । बायोमा आफु स्वयं वा आफ्नो कुनै ब्राण्डसँग सम्बन्धित ब्लग वा वेबसाइट पेजको लिंक दिन सकिन्छ ।
४। इन्स्टाग्राम लिंक अन्य सोसल मिडियामा पनि जोडिदिने स् इन्स्टाग्राममा तपाइँ जे पोष्ट गर्नुहुन्छ त्यसको ब्याकलिंक तपाइँले आफ्नो फेसबुक, ट्विटर अकाउन्ट लगायतका सोसल मिडियामा पनि पोष्ट गरिदिनुस् । यसबाट तपाइँप्रति मानिसहरुको ध्यान आकषिर्त हुनेछ । यो आफ्ना फलोअर्सलाई अन्य प्लेटर्फमबाट समेत फलो गर्नका लागि आमन्त्रित गर्ने माध्यम हुनेछ ।
५।प्रभावशाली व्यक्तिसँगको सम्पर्क स् आफ्नो बजारसँग सम्बन्धित मानिसहरुसँग इन्स्टाग्राममा जोडिइरहनुहोस् र सम्वादको सिलसिला कायम राख्नुहोस् । उनीहरुको पोष्टलाई लाइक गर्ने तथा कमेन्ट गर्ने गर्नुहोस् । यसो गर्दा तपाइँ ती प्रभावशाली तथा धेरै फलोअर्स भएका प्रयोगकर्ताको नजरमा पर्नुहुनेछ । कुनै न कुनै दिन त्यो प्रभावशाली प्रयोगकर्ताले तपाइँ वा तपाइँको कुनै ब्राण्डलाई प्रवर्द्धन गर्न सहयोग गर्नेछ । त्यसो भयो भने तपाइँको इन्स्टाग्रामको पोष्ट धेरै मानिससम्म पुग्नेछ र तपाइँका फलोअर्सको संख्या निकै बढ्नेछ । एजेन्सी
एकथरीको तर्क छ, हस्तमैथुनको स्वास्थ्यमा कुनै हानी छैन । बरु, यसले यौन आवेग शान्त गर्छ
जसले हामीलाई सधै उत्साहित र जागरुक राख्छ !
खुसी एक भावनात्मक अवस्था हो । तर, यसबाट मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यको सोझो सम्बन्ध रहन्छ
मदिरा र महिलाको यौन अनुभव: इच्छा जगाउँछ तर…
नेपाली समाजमा अहिले पििन यौनलाई ‘छाडा’ अर्थात विकृति मानिन्छ । यौनका विषयमा खुला चर्चा गर्नु
के तपाईको महिनावरी गडबडी हुन्छ ? यस्तो छ घरेलु उपचार
कतिपयको महिनावरी चाडै हुने वा ढिलो हुने भइरहन्छ । यस किसिमको अनियमित महिनवरीको एकमात्र कारण